गुट्खा उद्याेगमा बम बिस्फाेट
धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहानगरपालिका–१ स्थित देउती गुटखा उद्योग परिसरमा आज बिहान अज्ञात समूहले बम विस्फोटन गराएको छ ।
चाबहिल–साँखु सडक भदाै १२ अगावै मर्मत सम्भार
काठमाडौँ । घाम लाग्दा धुलोे र पानी पर्दा हिलो । चाबहिल–साँखु सडकखण्डमा हिड्ने जोकोहीलाई हिलो र धुलोले सताएको धेरै भयो ।
जनयुद्धकी कलाकारदेखि सफल उद्यमीसम्मकाे भूमिकाकाे यात्रा
दुई महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, गाउँपालिका सञ्चारविहीन
सल्यान । सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा दुई महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । नेपाल टेलिकमको जिएसएम सेवामात्र सञ्चालन भएको गाउँपालिकामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि गाउँपालिका सञ्चारविहीन भएको छ ।
शेरबहादुर विकले अस्पतालमा उपचार नपाउँदा अकालमै गुमाए ज्यान
जाजरकोट । उपचारका अभावमा रुकुमको चौरजहारीमा एक बिरामीको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का ४२ वर्षीय शेरबहादुर विकको उपचार अभावमा मृत्यु भएको हो ।
कालोबजारीको आरोपमा व्यापारी मुकेशप्रसाद गुप्ता पक्राउ
लहान । मदखादको अभाव रहेको मौका छोपी तोकिएको दरभन्दा बढी मुनाफा लिई मलखादको बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले आज सिरहा नगरपालिकाबाट एक व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
पूर्वएआईजीले गरे भक्तपुर इन्काउन्टरको विरोध, के भने ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भक्तपुरमा भएको इन्काउण्टरको विरोध गरेका छन् । सिआईबीका पूर्व प्रमुख समेत रहेका भण्डारीले भक्तपुरमा सोमबार भएको इन्काउन्टर हिरोइज्मको उदाहरण भएको बताए ।
समन्वयपछि विवादित सीमाक्षेत्रमा भारतद्वारा सडक निर्माण स्थगन
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवस्थित नेपाल–भारत सीमा पिल्लर नं. ३ को विवादित क्षेत्रमा बुधबार दिउँसोदेखि भारतीय पक्षले सडक निर्माण स्थगन गरेको छ ।